Afrika Mainty · Novambra, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Novambra, 2013
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Novambra, 2013
Afrika Atsimo 29 Novambra 2013
Benin 27 Novambra 2013
Ho fampahatsiahivana, ao Nizeria, izay firenena lehibe indrindra mpamokatra solika aty Afrika, efa ho ny roa ampahatelon'ny vahoaka no miaina ambanin'ny fetran'ny fahantrana ary ireo mba manana fahafahana miditra amin'ny tambajotran'ny herinaratra indray dia mizaka fahatapahana isanandro.
Eoropa Andrefana 23 Novambra 2013
Raha nihinjakinjaka tanteraka i Alzeria, Côte d'Ivoire, Kamerona ary Frantsa, dia levona tanteraka niaraka tamin'ny kiririoka farany kosa ny fanantenan'i Burkina Faso, Senegal, Okraina ary Tonizia hitodi-doha ho any Brezila.
Madagasikara 21 Novambra 2013
Etiopia 17 Novambra 2013
Nametraka fitoriana mikasika an'i Etiopia any amin'ny Kaomisiona afrikana miaro ny Maha-olona sy ny Zon'ny Vahoaka, ireo mpanao gazety anaty aterineto tsy miankina roa. Nitsangana izy ireo hanohitra ny fandikàna vilana ataon'ny fanjakana mikasika ny lalàna hiadiana amin'ny fampihorohoroana izay toa natao hanafoanana ny fahalalahana haneho hevitra.
Etiopiana: #MbaMisiaOlonaMitenyAmArabiaSaodita Hampiato Ny Famoretana Mpifindra Monina
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Novambra 2013
Nanomboka nampihatra ny famoretana ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna i Arabia Saodita taorian'ny nahataperan'ny fe-potoana famelan-keloka nomena ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna ireo. Mahatsiaro ho lasibatra ireo Etiopiana mpifindra monina.
‘Ahoana No Tsy Hiraharahantsika Ireo Kamboty Ao Nizera?’
Nizera 10 Novambra 2013
"Olana goavana ao Nizera ny fahakambotiana, ary toe-javatra akaiky ny foko hoy ireo bilaogera vaovao avy ao amin'ny Rising Voices tetikasa Sarintany ho an'i Nizera.
SARIPIKA: Avy Any Amin'ny “Outer Space” Mankany Amin'ny “Cyberspace”, Tako-masoandro Amin'ny Ampahany Ho an’ Nizeria.
Nizeria 10 Novambra 2013
Nahita maso ny tako-masoandro tamin'ny ampahany ireo Nizeriana tamin'ny Alahady 3 Novambra, tranga iray izay mazava ho azy fa nahatonga ireo Nizeriana mpisera anaty aterineto haneho hevitra.
Solitanin'i Bénin: Fikoropahana sa Fanambaràna Politika?
Benin 10 Novambra 2013
Nanambara ny governemanta beninoà fa nahita toera-pitrandrahana solika tao amin'ny faritra Sèmè-Podji. Mahafaly ny sasany izany toe-javatra izany fa mampanontany ny hafa kosa hahalalany ny antsipirihany momba ny fahitana ity zava-baovao ity.
Ejipta 06 Novambra 2013
Mandritra ny volana Novambra sy Desambra, mikarakara "fihaonana" enina mivantana izahay izay tantanina sy entanin'ireo mpikambana ao amin'ny Global Voices